Laaluushka Damuljadiid ama gacan taag | allsanaag
Laaluushka Damuljadiid ama gacan taag
Haddii ay reer Puntland waayeen doorasho ah hal qof iyo hal cod, maxaa diiday in 66 Xildhibaan gacan taag ku codeeyaan.
Dawladda Puntland oo labaatan jirsatay ayaa ku guul daraysatay in bulshada reer Puntland ay gaarsiiso dimoqraadiyad ah in qof kasta oo reer Puntland ah oo qaangaaray uu si xor ah u codeeyo, una doorto qofka uu doonayo inuu hogaanka u qabto Puntland
Marka ay doorashada madaxweynaha Puntlnd timaado bisha kowaad ee afartii sanoba mar, waxa codeeya oo madaxwqeynaha doorta 66 Xildhibaan oo ilaa hadda la aqoon sida ay ku dhisan yihiin. Halka beeli leedahay dhowr iyo sodon xildhibaan, beel kale ee reer Puntland ahina waxay leeyihiin 3 Xildhibaan.
Xildhibaanada qaab dhIsmoodkoodii hore xumaa, ayaa waxa ku jira 22 Xildhibaan oo ka soo jeeda Beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli oo danaystayaal ah, oo iyagu suga bisha 12aad in Musharaxa ugu lacagta badani uu afka u buuxiyo.
Tusaale Musharaxiinta sanadka u oradaya hogaanka Puntland waxa ka mid ah Siciid Cabdullaahi Deni oo ah siyaasi ay wataan Damuljadiid oo ku doodaya in la gaaray xilligii beesha Cismaan Maxamuud hogaanka qaban lahayd.
Beesha uu ka soo jeedo Deni, ayaa baarlamaanka Puntland ku leh dhowr Xildhibaan, hase ahaatee ku xisaabtamaya iyaga iyo Damuljadiid oo Musharaxa wata Xildhibaanda ka soo jeeda Beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli inay maalgashadaan ama laaluushaan , iyaga oo u soo maraya Xildhibaan Abshir Garaad oo ah xildhibaanka u qaabilsan laaluushka xildhibaanada Puntland . Shaqadii ugu danbaysay uu qabtayna ahayd , isaga oo laaluush soo qaaday maalintii xilka laga qaadayey gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire. Abshir wuxuu ka mid ahaa Xildhibaanadii lagu furay baarlamaanka Puntland, Maalintii Cabdulaahi Yuusuf la doortay waa joogay, maalintii Lascaanood la qabsaday waa joogay, maalmihii gudoomiyashii Dalmar ,Yuusuf Siciid iyo Sicii Xasan Gudoominimada laga qaaday waa joogay. Maalintii Maxamed Cabdi Xaashi laga eexday wa joogay
Ugu danbayntii si looga hor tago laaluush la qaato, Garnaqsi lala galo beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli oo ah in xildhibaanadoodii ay laba musharax lacag ka wada qaateen , si aan loogu eedayn xildhibaanada tirada badan ee Majeerteen ee gaaraya dhowr iyo sodonka inay yihiin qabiilaystayaal u codeeya oo qura qof ka soo jeeda beesha Majeerteen. Waa in doorashada soo socota ee madaxweynanimada Puntland ee bisha kowaad lagu qaadaa Gacan Taag. Lacag ku bixi mayso gacan la taagay , laakiinse kalsooni badan oo bulshada dhexdeeda ayaa abuurmaysa
← Madaxweynaha Puntland iyo Wefti Uu Hogaaminayo oo Kismaayo U Ambabaxay. Bidhaan iyo Oglen oo kulmay →